NRVNA mampiasa tsara toerana sy ny fotoana ara-foto-kevitra izay voly mandritra. Izany dia ahitana ny 30 paylines ary 5 reels. Ny nampihomehy dia hahatonga anao gameplay mihodina foana ny reels sy ny sehatra marika dia hanao anao ao amin'ny lalao.
Ho tianao ity lalao ity dia aza adino ny milalao mba hialana voly any am-Casino. Azonao atao ny misoratra anarana maimaim-poana ao amin'ny Coinfalls Casino amin'ny mametraka vola hatramin'ny £ 50.00 ary hahazo 200% mitovy ny tombony.
NetEnt no natao ity lalao mahafinaritra miraingiraingy azon'ny izay manana notch ambony fototra sary sy mahatalanjona mozika. NetEnt no nanaovany slots mahazatra sy ny Casino lalao izay avo amin'ny kalitao ary izany no iray amin'ireo tsara indrindra lalao.
NRVNA manana asa lehibe izay foto-kevitra hamorona ny fahalianana lehibe sy ny spins ity aesthetically lalao dia tsara tarehy. A coin size from 0.01p to £150.00 can be fixed in this game.
NRVNA mampiasa tena ratsy toy ny fanehoana an'ohatra 10, J, A, K, ary Q mba handoa anareo multipliers hatramin'ny x125.
Ny tena mifanitsy amin'izy io lalao ahitana ny efatra Jehody clover, kitron-tsoavaly, cherries, sevens, ary lakolosy. Ireo sariohatra ianao afaka mandoa ny mahafinaritra multiplier ny ho amin'ny x2, 000. Ny lalao dia mampiasa ny bibidia mariky ny fotsy mavokely kintana ao anatin'ny fefy izay suppléants ny sary eo amin'ny reels afa-tsy ny aelezo Logo.
Ny famantarana dia aelezo diamondra fotsy voahodidina lamban-ny volomboasary fefy ary dia mampiasa ny maimaim-poana spins mampiseho. Raha tany izy tamin'izany telo mitovy marika famantarana ny niparitaka sary azonao handresy hatramin'ny 10 maimaim-poana ary ny efatra manahaka spins hahazo anao 15 spins maimaim-poana sy ny 5 manahaka no handresy anao 30 spins.
Raha ny maimaim-poana spins dia nihodidina ny NRVNA kodiarana endri-javatra no niteraka izay mahazo multiplier ny x10 miaraka amin'ny 2 maimaim-poana fanampiny spins. Ny lalao ihany koa ny manan-Autoplay fomba izay afaka ho azy nametraka ny reels mba mihodina izay no nahatonga an'ilay bibidia goavana Fandresena. Koa mipetraka ary miala sasatra. Izany Mahasarika ny mahafinaritra RTP ny 96.60%.
NRVNA dia nofinofy ara slot lahatsary izay mampanantena ny hanome fahafinaretana sy ny fialam-boly. Raha toa ianao ka tia slots sy mitady mamirapiratra slot lalao dia ity iray ity dia tsy handiso fanantenana anao. Hisoratra anarana maimaim-poana any am-Casino mba hahazo miavaka fonosana tonga soa ny 200% eo amin'ny petra-bola voalohany hatramin'ny £ 50.00.Hurry hiaraka ny Casino izao!